पूर्व आईजीकी छोरीको दादागिरी_प्रयोग भए सशस्त्र प्रहरी, २ किलोमिटर नाङ्गै लखेटियो यिनलाई !(भिडियोसहित)  Hamrosandesh.com
ठिक छ प्रदेशै पिच्छेको एजेण्डा नै रेल हुने हो भने त्यसका लागि चाहिने तयारी खोइ ? कलेज, युनिभर्सिटी, इ्रन्टीच्युटहरुमा रेलको अध्ययन बारेका कोर्सहरु तयार पारिएको छ त ? ५ बर्ष म्याण्डेट पाएको दुइ तिहाई बहुमतको सरकारले चाहने हो भने रेल ठुलो कुरै होइन । तर के पटरी लाग्दैमा रेल कुद्छ ?
के अपरेटर, मर्मत सम्भारकर्ता, पाटपुर्जा टेक्नोलोजी सबका सब भारतबाट ल्याउने ? चाइनबाटै रेल ल्याउँदा पनि कत्रा कत्रा पहाड फोडेर कयौ टनेलहरु बनाउनु पर्छ । त्यो सानो खर्चले बन्छ ?